ko htike's prosaic collection: အနာဂါတ် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်ရေးကို ဘာနဲ့ ထိန်းမလဲ
အနာဂါတ် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်ရေးကို ဘာနဲ့ ထိန်းမလဲ
စစ်တပ်က ထိန်းချုပ်ထားမှ တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်နိုင်မယ် ... တပ်ပြိုကွဲရင်(ဒါမှ မဟုတ်) စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်တွေရှိနေရင် တိုင်းပြည် မတည်ငြိမ်ဘူး၊ အစိပ်စိပ် အမွှာအမွှာကွဲမယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေက ဒီနေ့ အထိ စစ်တပ်ထဲက စစ်သား အချို့နဲ့ စစ်တပ်ဝါဒကို ထောက်ခံသူ အချို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့နေရဆဲပါပဲ။
တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် စစ်ဝါဒီ ခေါင်းဆောင် အကြမ်းဖက်သမားသန်းရွှေနဲ့ သူ့ လူတချို့ စားပေါက်ကောင်းအောင် ဝါဒဖြန့်ထားတဲ့ လှိမ့်လုံး၊ ဖြီးလုံးတွေ ဆိုတာကို အဲဒီ တပ်ထဲက လူနဲ့ တပ်ကို ထောက်ခံတဲ့ လူတွေ သတိမထားမိသေးတာ တွေ့နေရလို့ပါပဲ။
ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ စစ်သား ဆိုတာ စစ်သား အလုပ် လုပ်ရမှာပါ။ စစ်သား အလုပ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြည်ပရန်ကို ကာကွယ်ဖို့က နိုင်ငံတိုင်းက စစ်တပ်တွေရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ အဓိက အလုပ်ပါ။
အခုတော့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်မလုပ်ဘဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေက မတော် လောဘကြီးလာပြီး တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ လူတကာ လေးစားခံရတဲ့ အငြိမ်းချမ်းဆုံး ဘာသာလို့ သတ်မှတ်ထားခံရတဲ့ ကိုယ်တိုင် ကိုးကွယ်တယ်လို့ ပြောထားပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာ သံဃာတော်တွေရဲ့ ဦးခေါင်းကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ တတ်နင်းရတဲ့ အဖြစ်အထိ ဖြစ်လာအောင် မတော်လောဘတွေ ဖုံးလွှမ်းနေပါတော့တယ်။
စစ်သားအလုပ်ဆိုတာ သံဃာတော်တွေရဲ့ ဦးခေါင်းကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ နင်းဖို့ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည် ပြည်ပရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ မတော်လောဘရဲ့ စေခိုင်းချက်အရပဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်၊ အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ထပ်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်အာဏာကို ယူထားမယ်လို့ အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တွေက ကြံနေပြန်တယ်။ စစ်သားကောင်းဖြစ်အောင် မကြံတော့ဘူး။
ဒီတော့ အကြမ်းခေါင်းဆောင်တွေက အဲဒီလို အာဏာမြဲနိုင်အောင် ခုနက ဖြီးလုံး၊ လှိမ့်လုံးတွေနဲ့ စစ်သားတွေကို စည်းရုံးရပါတော့တယ်။ စစ်တပ် မပြိုကွဲမှ ဖြစ်မယ်။ တိုင်းပြည်မှာ စစ်တပ်ဆိုတာ တခုပဲ ရှိရမယ်တွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်ပြီး လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ် တောင်းဆိုတဲ့ သံဃာတော်တွေကိုတောင် သေနတ်နဲ့ပစ်၊ ဒုတ်နဲ့ရိုက်၊ ထောင်ချတာတွေ လုပ်ရဲတဲ့ သတ္တိရှင် တပ်မတော်သားတွေကို လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတွေက မယုံတာ ယုတ္တိရှိတယ် ပြောလို့ရပါတယ်။
အခုလို မယုံကြည်တော့တဲ့ အခါ ငါ့ကို မယုံရကောင်းလား ဆိုပြီး စစ်အင်အားနဲ့ လိုက်ရမ်းကားတာတွေ လုပ်ပြန်ပါလေရော။ ဒီတော့ ပို မယုံ ဖြစ်တယ်။ .. စစ်အင်အားနဲ့ တိုင်းပြည်ကို သေနတ်မိုးပြီး ငြိမ်အောင် ထိန်းလို့ရမယ်လို့များ အဲဒီ လူတွေ အိမ်မက် မက်နေကြလားမသိ။ စိတ်ကူးတော့ အတော်ယဉ်တတ်တဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ ပြောရမှပါပဲ။
ဒီတော့ ပထမစကား ပြန်ကောက်ရရင် တိုင်းပြည်မှာ စစ်တပ် တခုတည်းရှိမှ အေးချမ်းမယ်လို့ ပြောတာ မှားသလားဆိုတော့ မမှားပါဘူး။ မှန်သလား ဆိုရင်လည်း .. လက်ရှိ တိုင်းပြည်ကို လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်သမားအဖွဲ့ (နအဖ)တွေ ဖျက်ဆီးထားတဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေအရ အဲဒီ အဆိုက လုံးဝ မမှန်ပါဘူး။
တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းဖို့မှာ တပ်အင်အား တောင့်တင်းခြင်း၊ အားနည်းခြင်း ... စစ်တပ်က ခေါင်းဆောင်တွေ ပါလီမာန်မှာ ဝင်ထိုင်ခွင့် ရခြင်း မရခြင်းတွေအပေါ်မှာ လုံးဝ မူတည်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ထို့အတူပါပဲ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်တွေ ရှိနေခြင်း အပေါ်မှာလည်း တိုင်းပြည် ပြိုကွဲမယ်လို့ ပြောနေတာတွေလည်း အဓိပ္ပါယ် လုံးဝ မရှိပါဘူး။
တိုင်းပြည် အေးချမ်းဖို့နဲ့ တိုးတတ်ဖို့မှာ အဓိက ကျတဲ့ အချက်တွေကတော့ ...
(၁) တိုင်းပြည်တွင်း ပြည်သူတွေက အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားကို ကျေနပ် ချစ်ခင်ဖို့ (လက်ရှိ နအဖ ကိုတော့ ပြည်သူလူထုက အော့နှလုံး နာနေကြပါတယ်။ စစ်သားကို မုန်းတာ မဟုတ်ပါ။ စစ်ဝါဒီ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်သမားများကို မုန်းတာပါ။)
(၂) တိုင်းပြည်တွင်း တရားဥပဒေ မဏ္ဍိုင် ဖြောင့်မှတ်ပြီး၊ လူတိုင်းက လေးစားလိုက်နာဖို့ (လက်ရှိ နအဖ လက်ထက်မှာတော့ တရားရေး စနစ် တခုလုံး ပျက်ဆီးနေပါတယ်။ ... ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာ .. လက်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှု ကိစ္စ။)
အဲဒီ အချက် (၂) ချက်က အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ ခုနက လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေ ရှိနေခြင်း ပြဿနာထက် ပိုအရေးတကြီး ဖြေရှင်းရမယ့် ကိစ္စပါ။
အထက်က အချက် (၂) ချက် ရှိမယ်ဆိုရင် .. ဖက်ဒရယ်မူ တစ်ခုကို အဲဒီ အချက် (၂) ချက်ကို ဦးတည်ပြီး အခြေခံ ဥပဒေမှာ ထည့်ဆွဲမယ်ဆိုရင် ကိုးကန့်ကိစ္စလို .. ရဲနဲ့ စစ်သားအချို့ရဲ့ မိန်းမတွေ အခုလို မုဆိုးမ ဖြစ်သွားကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဖက်ဒရယ်မူမှာ ရှိတဲ့ အာဏာသုံးရပ်ကို ခွဲဝေရာမှာ ဘယ်လိုပုံနဲ့ ခွဲဝေ မလဲဆိုတာကို အခြေခံဥပဒေမှာ အားလုံး ကျေနပ်သဘောကျအောင် ထည့်ဆွဲလိုက်ရင် စစ်သားနဲ့ ရဲတွေ ရဲ့ မိန်းမတွေ အတော် စိတ်ချမ်းသာကြမယ် ထင်ပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ၊ ဥပဒေပြုရေးအာဏာ၊ တရားစီရင်ရေး အာဏာ စတာတွေကို ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ဒေသခံ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘယ်လို ခွဲဝေယူမယ် .. လုံခြုံရေးကို ဘယ်လို တာဝန်ယူမယ်၊ ဘယ်လို တာဝန်ခံမယ်။
အဲဒီ အချက်တွေကို ဥပဒေရေးရာနဲ့ ဘယ်လို ထိန်းမယ်။ ဗဟို အစိုးရက အစစ အရာ လက်ဝါးကြီး မအုပ်ဘူး။ ဒေသခံပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ပြည်နယ်တိုးတတ်ရေးအတွက် ဘယ်လောက် သုံးမယ်၊ ဗဟိုအစိုးရကို ဘယ်လောက် အခွန်ပေးမယ်။ ဗဟို အစိုးရက ဘာတွေကို တာဝန်ယူပေးမယ်။
တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး လေးစား ယုံကြည်မယ်။ မလိုအပ်ပဲ ဝင်မစွက်ဖက်ဘူး။ .. အဲဒီ အချက်တွေကိုသာသေသေ ချာချာ ကျေကျေနပ်နပ် အခြေခံဥပဒေမှာ ထည့်ဆွဲမယ်ဆိုရင် ...
တိုင်းပြည်မှာ တပ်မတော် တခုမက ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းက အဓိက မကျတော့ပါဘူး။ ရဲနဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ မိန်းမတွေလည်း မုဆိုးမ ဖြစ်ပြီး၊ သားသမီးတွေ ဖခင်မဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်နေတာတွေ ရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါကြောင်း ....
Posted by ကိုထိုက် at 02:05
I want to suggest you openly that you better post updated news and republish other good articles in your blog. I don't want you think of yourself asasmart guy and writing smart things.
Do not forget that your blog got wider recognition because you posted updated news from inside Burma. Most of the readers of your blog are here to read news but not your personal opinions. As it is your blog, you can do whatever you want but the problem is people are sick of seeing more and more smart asses in the politics but not with real smart ideas or selfless and genuine activists. No personal but you should not include in the group of hypocrites.
6 September 2009 at 14:34
Who said ko htike only need to post news. He own his blog and he can do what he want. If you can, you do your own blog. We'll come and read if we want. At least we can think if it was good.
The blogs are more of "personal" nature. But, I think I understand YeYint's frustration. It shows that people are fed up with talks but no actions. The truth is we need people with ideas and also people who take actions on those ideas. But, more importantly we need both talkers and do-ers to work with each other without blaming either side.
Please tell us if there is any peaceful country or the country that has not broken apart with many different armed groups. Should think logically between idealism and realism. Should not talk just anything what you think without any guarantee of peace that you cannot give.
I dont know much about politics but from my point of view this article is fine.what's the problem?
I can read new post as well as blogger's ideas.The problem for me is keeping or seeing old post forafew weeks.that's it...No problem as long as the blogger works..
10 September 2009 at 20:12